Kooxdii Jwxo-shiil oo Dhawr Faladh Noqotay – Rasaasa News
Kooxdii Jwxo-shiil oo Dhawr Faladh Noqotay
Sep 11, 2009 Jwxo-shiil, Qaaxo
Hawraar la raaciyo raad malaha beenbtuye, khayaaniyo rafiiqeed raas lagu nagaadiyo iyo raasamaal ma keenee, taladaan la ruugin nina uuma roonoo waa lagu rafaadaa, rixinigii qurxoona, kuwii rubada gooyow kama raysanaysaan
Tan iyo intii la dilay Dr. Maxamed Siraad Dolal, ayaa waxaa ka soo if baxayey kooxda Jwxo-shiil kalsooni daro ka dhex taagnayd gudahooda, oo uu keenay shaki wayn oo ahaa lugtii ay kulahaayeen xubno ka tirsan kooxdan dilka Dr. Dolal. Waxaa kale oo iyana niyad jab wayn ku keentay guud ahaan xubnah ururka ONLF iyo taageerayaalkiisa, ka dib kolkii uu ururku sooba hadal qaadi waayey wax qabadkii halgan ee uu Dr. Dolal.
Arintan oo ay cid waliba candhuufteeda dib u liqday garwaaqsatayna, kolba hadii dadaal guud oo aad ummadaada u gaysato ayana abaal cidina kuugu hayn waxa aad ku daashaaba waa bilaash.
Waxaa hal mar salka dhulka ku dhufsaday halgankii Somalida Ogadeeniya ee xabada aan kala go,a lahayn ku jiray 20 sano ee ugu dambaysay, kaas oo uu horsed ka ahaa ururka ONLF, oo aan odhan karo Aabihii wuu dhintay.
Intii xiligaasi ka dambaysay waxaa hankii ay qabeen ku hongoobay kooxda Jwxo-shiil, oo hankoodu ahaa Dr. Dolal dunida dhaafiya waxaad dhaxlaysaan haybadiisa halgan “haybad Eebe ku siiyey habeen layskama qaado halgankii la halee”.
“Boholo khayaano ha qodin hadaad qodana ha dheerayn ku dhici doontaana mooyiye” Hadaba, kooxda Jwxo-shiil, oo kolkii hore isugu jirtay dhawr koox, oo kuwada socotay baabukhayaano, ayaa waxaa soo ban baxaysa in ay sidda u muuqato kala bax aan qarsoonayn. Hanaankii uu ku bilowday kooxasysigu waxaynu ku soo qaadan qodob gaar ah maalmahan soo socda, maantase waxaan sugi sida ay u kala fadhiyaan kooxda Jwxo-shiil.
Kooxda Jwxo-shiil, waxay yeelatay Afar kooxood oo iska soo horjeeday oo kala ah; Kooxda Mr.Qaaxo, Kooxda Ina Aw Xuseen [Qoslaaye], Kooxda Jwxo-shiilo [qabiil ku jabhad] iyo Kooxda Qalin.
Kooxda Mr. Qaaxo, oo uu madax u yahay Qaaxo ayaa waxaa tahay kooxda isu muujiska badan, waxaana ka mid ah Ina Dhuubo, Maxamed Ibraahin [Itixaad] iyo Xuseen Nuur [Garaabo]. Kooxdan oo iyadu si ficiltan ah isu abaabulaysa iyaga oo leh halganka Jwxo dhibaatooyin badan baa nagu soo gaadhay muddo badana waanu soo wadnay, khaladka dhacayna anaga ayaaba ka dambaynay oo muddo dheer soo gardaadinay. Kooxdan waxaa si wanaagsan u taageeraya oo hoostana kala jiray kuwo haatan ku xidhxidhan dalka Sweden, ka dib kolkii ay si doqonimo ah u dileen Maxamed Shiil Kabadhe [Maxamed Sahal].
Kooxda Ina Aw Xuseen [Qoslaaye], waa koox qaambay ah oo aan dabo socdo mooyee lahayn hor socod una badan hal qoys. Kooxdan waxaa ka mid ah Ina Aw Xuseen oo madax u ah, Macalin Diirane, Muudeey iyo Khalisa. Kooxdan waxaa taageerayaalkoodu way yar yihiin waxayna joogaan dalka Ingriiska kaliya waana dhawr Oday iyo dhawr Ilaamood.
Kooxda Jwxo-shiilo [qabiil ku jabhad] waa koox beel sooc ah, wax mabaadii Jabhadeed ahana kama muuqato, waxayse ku dagaalamayaan yaan la odhan Jwxo-shiil gacantiisa ayuu ururkii ONLF ku burburay. Kooxdan waxaa ka mid ah Yuusuf Cadami, Maxamed Macalin [Seedi], Maxamed Dheeg Caagane iyo Cabdiqadir Sulub oo sheegan jiray Ogaden Human Rights, balse mudo dheer si qarsoon u ahaa la taliyaha khaaska ah ee Jwxo-shiil. Kooxdan waxaa si hal dhubuqle ah oo aan isla soconin u taageera, xubno ka tirsan ururka dhalin yarta Ogaden, oo uu iskaga tagay ninkii aas aasay oo ahaa Ina Sheekh Muxumed Iraad. Taageerayaalkiisa kale waxay u badan yihiin gabadhi keentay [Abti iyo Seedi], waxaana laga kala helaa Ingriiska iyo Norway.
Kooxda Qalin, kooxda qalinku ma laha hogaan, kolkii horebana waxay ahaayeen kuwo lagu riti kacsado oo magac uun loogu soo daray Jabhada [nominal], si loo yidhaahdo Professor, Dr iyo Engineer hebel baa shirka ka hadlay. Runtii ma ayna ahayn dad ka warhaya khayaanada iyo iska hoos guurka ururka dhexdiisa ka jirta, kolkii ay hada ogaadeena wax ay sameeyaan iyo meel ay wax ka bilaabaan ayey la,a yihiin. Waxaa ka mid ah kooxdan Cabaas, Cibaado, Hanad, Bisle, Miraad iyo qaar kale oo badan, waxay aad uga calool waydsan yihiin sida wax u dhaceen, waxayna jeclaan lahaayeen in ayna kolkii horeba ka mid noqonin.
Afartan kooxood, marka laga reebo kooxda Qalin, ayaa saddexda kale waxaa mid walba ku jira hami ah in ay iyadu madax ka noqoto kooxdii hore la odhan jiray Kooxda Jwxo-shiil, taas oo ku sifowday halgan dumisnimo, daahana ay dadka ka siidaysteen iyaga oo jecelaaday in ay ku badalaan Golaha Sare ee ONLF oo aan isagu wali awood badan muujin.
Ugu dambayan waxaan filayaa in Afartan kooxdba, marka laga reebo Qalin ay arintooda tahay qoysataye yaa kuu xiiri.
Jwxo-shiil oo Noqday Waxartii Kildhiga Madax la Gashay ee Adhiga Dhex Oraday
Jwxo-shiil oo la Xaqiijinayo in uu Isbtitaal ku Jiro